Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Dengue Fever (သွေးလွန်တုပ်ကွေး)
Depression (စိတ်ကျရောဂါ )
Fish oils (ငါးကြီးဆီ)
Black Pepper (ငရုတ်ကောင်း)
Chinese Cucumber (တရုတ်သခွားသီး)
Goose Berry (ဇီးဖြူသီး)
Spirulina Algae (စိမ်းပြာရေညှိ)
ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) တွက်ချက်ခြင်း
အခြေခံတစ်နေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) တွက်ချက်ခြင်း
ရှိသင့်တဲ့ ပျမ်းမျှနှလုံးခုန်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း (Target Heart Rate Calculator)
ဆေးလိပ်သောက်သုံးတာကြောင့် ဘယ်လောက်ကုန်ကျနေသလဲ (Smoking Cost Calculator)
သွေးတွင်းအယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု တွက်ချက်ခြင်း (BAC)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း)
ရေးသားသူ Nadi ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ချွေးထွက်လွန်ခြင်းသည် အပူချိန်များခြင်း သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သောအချိန်မျိုးတွင်ပုံမှန်ထက်ပို၍ချွေးထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့် သင့်အဝတ်စိုရွဲသွားခြင်း သို့မဟုတ် ချွေးများလက်ကစီးကျလာခြင်းထိဖြစ်တတ်သည်။ ထိုပြင် သင့်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအနှောက်အယှက်ပေးမည့်အပြင် ချွေးထွက်လွန်ခြင်းကြောင့် ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း အရှက်ရခြင်းတို့ပါဖြစ်တတ်သည်။
ချွေးထွက်ခြင်းသည်အရှက်ရစေသည် အကျီများကိုစိုစေသည် ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းများပျက်စီးစေသည် စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ပိုဆိုးပါက ဘောပင်ကိုင်ရန် ကားလက်တန်းကိုင်ရန် သို့မဟုတ် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန်ခက်ခဲသည်အထိဖြစ်တတ်သည်။
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
များသောများဖြင့် လူများသည် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းငို့မဟုတ် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်လိုက်ခြင်း ပူသောရာသီဥတုတွင်နေခြင်း ရင်တုန်ခြင်း စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခါမျိုးတွင်မှ ချွေးထွက်တတ်ကြသည်။
ချွေးထွက်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့်လက် ခြေ လက်မောင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာတွင်ဖြစ်တတ်ပြီး အနည်းဆုံး တစ်ပါတ်တခါ လမ်းလျောက်သောအချိန်များတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။ ချွေးထွက်ခြင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်နှစ်ခြမ်းလုံးတွင်ဖြစ်တတ်သည်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲကတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အပူချိန် ၁၀၄ ဖာရင်ဟိုက်(၄၀ ဆဲစီးရပ်) သို့မဟုတ် ပိုများနေခြင်း
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ချွေးထွက်ခြင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်အေးအောင်လုပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အာရုံကြောစနစ်သည် အပူချိန်မြင့်လာချိန်တွင် သင့်ချွေးထုတ်အိတ်ကိုနိုးစွပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လဲချွေးထွက်တတ်သည် များသောအားဖြင့် သင်စိတ်ပူနေပါက လက်ဖဝါးများတွင်ဖြစ်တတ်သည်။
ချွေးထွက်လွန်ခြင်းသည် ချွေးထုတ်အိတ်ကိုနှုံဆော်မှုများခြင်းကြောင့် မလိုအပ်သောအချိန်တွင်ပင်ချွေးထွက်စေသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် စိတ်ပူပင်ခြင်းကြောင့်ပိုဆိုးနိုင်သည်။
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းလဲရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိသားစုထဲတွင်ဖြစ်သောသူအများအပြားရှိတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ချွေးထွက်လွန်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အခြားသောချွေးထွက်လွန်တတ်သောရောဂါဟုသံသယရှိပါက ဥပမာ သိုင်းရွိုက် အလုပ်လုပ်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် သကြားဓါတ်နည်းခြင်း ဆရာဝန်မှ သွေး သို့မဟုတ် စီးကိုစမ်းသက်လိမ့်မည်။
Hyperhidrosis (ချွေးထွက်လွန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆေးဆိုင်တိုင်းတွင်ဝယ်နိုင်သော ချွေးထွက်မှုဆန့်ကျင်သောဆေး (သတ္ထုပမာဏအနည်းငယ် များသောအားဖြင့် အလူမီနှီယမ်) ကိုအရင်ပေးသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလွယ်ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်ကလိုရိုက်သတ္ထုပါသော ချွေးထွက်ဆန့်ကျင်သောဆေး (ဥပမာ ကာတိန်း ဒရီ) ကအခြားဆေးများထက်ပိုထိရောက်သည်။
လိုတိုဖိုရီစစ်။ ကရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အိုင်ယွန် အသွင်ပြောင်းထားသောရေကို တိုက်ရိုက်လျှုပ်စစ်ပြီး အရေပြားအားဖြတ်စေသည်။
ဆေးသောက်ကုထုံး။ ကိုလီနားဂျစ်ကိုဆန့်ကျင်သောဆေးက ချွေးထွက်သက်သာစေသည်။
ဘိုတောက်(ဘိုကျူလီနန် အဆိပ်)အေ အမေရိက ဆေးကွက်ကဲရေးအဖွဲ့မှချိုင်းအောက်ချွေးပြန်ခြင်းကိုကုရန်ှခွင့်ပြုထားသည်။
မီလာဒရိုင်း။ မိုင်ကရိုဝေ့အားဖြင့် ချွေးထုတ်အိတ်များကိုသတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
လေဆာသည် ချိုးအောက်ရှိ ချွေးထုတ်အိတ်ကို သတ်နိုင်သည်။
ရင်ဘတ် ဆန်ပတ်တီတတ်မီ ကိုနောက်ဆုံးအနေနှင့်စဉ်းစားသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် ချွေးထွက်လွန်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ချွေးထွက်တားသောဆေး။ အလီမီနီယမ်ပါဝင်သော ညွန်ကြားချက်မလိုသည့်ချွေးတိတ်ဆေးက သက်သာစေသည်။
ရေမှန်မှန်ချိုးပါ။ ပုံမှန်ရေချိုးခြင်းက အရေပြားပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားကိုပုံမှန်အရေအတွက်အတိုင်းရှိစေသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး အဓိကအားဖြင့် ခြေချောင်းနှင့်လက်အောက်ကိုခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
ခြေအိတ် ဖိနပ်ကို သဘာဝအတိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အရာကိုရွေးချယ်ပါ။ သဘာဝပစ္စည်း ဥပမာ သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖိနပ်များက ခြေထောက်ချွေးထွက်ခြင်း ကိုသက်သာစေသည်။
ဖိနပ်များလှည့်ဝတ်ပါ။ ရူးဖိနပ်များကတစ်နေ့ထဲဖြင့်ခြောက်မည်မဟုတ်ပါ။ တူညီသောဖိနပ်အား နှစ်ရက်ဆက်မဝတ်ပါနှင့်။
ခြေအောက်အားလေ၀၀ရပါစေ။ ခြေဖလာနှင့်လျောက်ပါ သို့မဟုတ် ရူးဖိနပ်ကိုခဏခဏချွတ်ပြီးသွားပါ။
သင့်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သင့်တော်သောအဝတ်ကိုဝတ်ပါ။ သဘာဝပစ္စည်း ချည်သား ပိုး များ က သင့်အရေပြားအသက်ရူရပိုအဆင်ပြေစေသည်။
စိတ်သက်သာစေသောနည်းလမ်းများကိုသုံးပါ။ဥပမာ ယောဂ တရားထိုင်ခြင်းမျိုးလုပ်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ချွေးထွက်ခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
အကယ်၍သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်သင့တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတ် 12, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတ် 14, 2018
Hyperhidrosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/basics/definition/con-20030728. Accessed January 13, 2017
Excessive Sweating (Hyperhidrosis). http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hyperhidrosis2#2. Accessed January 13, 2017
Hyperhidrosis. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperhidrosis#. Accessed January 13, 2017
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်လွန်ကဲခြင်း လက္ခဏာများ
လည်ချောင်းခြောက်ပြီး ယားနေတာ ဒါတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်နော်
အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်တန့်သွားခြင်း (Sleep Apnea)
သင့်မှာရော ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်လွန်ကဲခြင်းတွေ ရှိနေပြီလား
သွေးတွင်းဆိုဒီယမ်ဓါတ်နည်းခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ
With from Yangon
Official Partner of the Ministry of Information
Policies MM Test
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကိုယ်အလေးချိန် တွက်ချက်ခြင်း (Pregnancy Weight Gain Caculator)
ကျန်းမာရေးအချက်အလက်၊ ရင်းမြစ်များနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကိရိယာများ